Yokutambudzika anotaura kudzoka kwaJesu | Apg29
Yokutambudzika anotaura kudzoka kwaJesu
Hapana ndapukunyuka vaicherechedza okupedzisira nhau, uye handizivi kana zviri kupfuura ndinofunga, "zviratidzo zvenguva" apo tinotarisa izvi?
Isu tose ruzivo vane UN mashoko, izvo vakaenda vanhu anongonzi pangozi kana muitiro mberi, uye kusununguka enyika ukama US, North Korea uye Iran, izvo chete Inowedzera uye zvaingoreva putika upfu keg.
Kana shoko rouprofita, pane dzakawanda zvipupuriro kubva varumudzani, uyo vakawana chikumbiro, zvose mashoko yehondo, apo North Korea uye Iran unobatanidzwa. Zvose inofanira kuongororwa, asi sezvo pamire, hatisi kure "makuhwa" chaichoicho.
North Korea uye Iran
Kim Jong-un, mutungamiri North Korea kuti, achangobva akapedza yechipiri chombo vachipfura pavhiki, pasinei vamba zvipikirwa kuti Kim haana kuita zvakawanda chitundumuseremusere nemiedzo.
Panguva iyoyowo, ukama America pamwe Iran kugadzikana chaizvo, pashure Iran wakatyisidzira kudzura kubva chibvumirano renyukireya riri pamusoro kuramba anomufumisa uranium exchange.
Russia uye China anotsigira Iran, uye rinoshora US kumanikidzwa uye zvirango.
Netanyahu kwakaitawo vakateerera Iran okuti, uye mashoko, kuti "Israeri haazobvumiri Iran kuti zvombo zvenyukireya." US anowedzera kumanikidza Iran nokutuma vatakuri ndege uye murwi ndege kune Forvägen tya nharaunda.
rwiyo The yokudenga
Zvakazarurwa 5: 9-10 - Zvino vakaimba rwiyo rutsva, "Ndimi makafanira kutora bhuku rakapetwa nokuzarura zvisimbiso zvaro, nokuti iwe vakauraiwa, uye neropa renyu yamakatenga kwatiri Mwari kubva mumadzinza ose nendimi nevanhu uye rudzi. Makatiita madzimambo nevapristi kuna Mwari wedu, uye tichatonga panyika. "
Pane rwiyo kuti Jehovha akakupa nokuisa mumwoyo yenyu. Zviri rwiyo kuti hapana asi asina rwakaimbwa kana akanzwa manzwi. It anozvarwa, uye varemekedzwe munyika yokudenga. Zvinonzi akatimirira, uye ndiye rwiyo yokudenga, iyo yakagadzirirwa uye vakazvitsaurira kuna Ishe vakasarudzwa uye akadzikinura vazhinji.
Zviri rwiyo inobaya mwoyo waMwari, uye kuti ngirozi chete vanorota kukwanisa kutora uye kuva chikamu.
Asi chete vanhu vari kubva upenyu huno hwepasi, vanogona kunakidzwa uye vachiimba rwiyo urwu. Vanhu avo vakanatswa Nezvinhu neropa reGwayana, mweya uyo vakatsiva kukunda waJesu pamuchinjikwa uye akariita ake.
The rwiyo anopiwa vanhu vanodanwa, zvakafanorongwa uye akasarudzwa pamberi Earth Foundation, - vanhu vanoponeswa nenyasha dzaMwari, uye avo mazita avo mubhuku inokosha.
Nokukurumidza, nokukurumidza, isu vachabvumirwa kuimbira munhau mukuru vanoimba - rwiyo uye vakanamata Jesu Kristu, gwayana rakaurayiwa.
Yokutambudzika achinongedza kudzoka kwaJesu!